Resaky ny mpitsimpona akotry : ory hava-manana | NewsMada
Asa izay biby kely manaikitra ireo olom-bitsy ao amin’ny antoko Leader-fanilo izay manahavary ny raharaha an-tokantrano. Ny filazana hoe ory hava-manana dia marina ihany fa tsy ampy ifehezana ny tena vontoatiny izay itoeran’ny fisiana alahelon-kanina, noho izy ireo mikaroka toerana mafy, nefa tsy manana zoto hanefa ny adidy fitolomana an-tsehatra, misy aza manadino ny andraikitra amin’ny maha-mpikambana azy dia ny fanefana ny anjara latsakemboka. Aiza dia hitady hitatatra fotsiny ho an-dRainilahizafy. Azo lazaina koa fa mpamosavy malemy, ka ny ao an-trano ihany no aripaka! Fantatra fa efa mangidy vava dia mbola ampiana fahamaimbona vava indray ve? Ambonin’izany handrora ihany ka handrora mitsilany, ny tarehin’ny tena indray no misolitika niverenan’ilay ranon-dolana naloa nolazaina hoe nampihoaka.
Io raharaha io anie dia mangarahara, afaka nitaraina momba ny fandinganana niseho ka nanetsika alahelo ireo olona ireo na atao aza hoe namboraka izany taty ivelany mihitsy, fa izy indray no nihoa-pefy amin’ny fandraisana fepetra izay tsy zony mihitsy afa-tsy hoe finiavana hanitsakitsaka ny fitsipika no sady anaovana fanalam-baraka ny antoko izay lazaina ho arovana. Toy ny zaza ratsy taiza mitady hananatra ny ao an-trano.
Tsy nahavita ny adidiny ny Leader-fanilo raha izany no dinihina, anisan’ny andraikitra voalohan’ny antoko pôlitika ny fampiofanana ny mpikambana ao aminy mba hananan’izy ireo fahaizana mikirakira ny raharaha mikasika ny fizotra sy fitantanana ny asa fanompoana ny firenena ao anatin’ny fanajana sata fahamendrehana. Raha izany no tsy efa dia toy ny fitaizana bibilava ao anatin’ny ankohonana, ka tsy ilaozan’izay fisehoan’ny fihetsika jiolahimboto manohitra. Mifanindry indrindra izany, soa ihany, amin’ny fanomanan’ireo tompon’andraikitra ao amin’io antoko io lamin’asa ho entina fanomanana ny mpikambana ao aminy hiatrika adidy lehibe mavesa-danja eo amin’ny sehatra pôlitika, adidy tsy maintsy efaina ara-pomba na ao anatin’ny fitondrana ny tena na anisan’ny mpanohitra. Ny fitsipika voalohany amin’izany dia ny fanajana ny fanapahan-kevitra noraisin’ny mpitantana eo amperin’asa voatendry araky ny fitsipika anatiny. Raha toa moa misy ny tsy fitovian-kevitra dia tsy voatery handefitra amin’izao fa misy angamba fomba sy sehatra anaovana fanoherana, raha toa tsy misy toerana malalaka ho an’ny mpanohitra dia tsy mbola demôkratika ilay antoko.